रैराङ हाइड्रोपावरको आइपीओ खुल्यो, कति गर्ने आवेदन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सोमबारदेखि आइपीओ खुला भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन खुला गरेको हो । यसमध्ये ३३ हजार ६०० कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको ७ लाख ६४ हजार ४०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको हो ।
यो आइपीओमा जेठ ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिमा आवश्यक मात्रमा आवेदन नपरेमा भने जेठ २९ गतेसम्म भर्न पाइने व्यवस्था छ । आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी–आस्वा प्रणालीमार्फत सेयर भर्न सकिनेछ । यसमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ४ हजार २०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइन्छ ।
लगानीकर्ताले एनआइबिएल एस क्यापिटल लाजिम्पाट, रैराङ हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि थापाथली र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सि आश्वा मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले घर मै बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट आइपिओमा आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले जारी पुँजी ५६ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको हो । रैराङले यसअघि पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीलाई ५ लाख ६० हजार कित्ता आइपीओ बिक्री गरिसकेको छ । रैराङको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९७.४४ रुपैयाँ रहेको छ । जारी पुँजी ५६ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले हाल कम्पनीको जारी पुँजी ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व ७५ प्रतिशत रहेको छ ।